साउनमा हुनैपर्ने करको काम कसरी हुन्छ ? ‘अवस्था सामान्य रहे’ आईतवारबाट सेवा सुचारु हुने - Arthapage
साउनमा हुनैपर्ने करको काम कसरी हुन्छ ? ‘अवस्था सामान्य रहे’ आईतवारबाट सेवा सुचारु हुने
प्रकाशित मितिः २० श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:२८ August 4, 2020
नेपालगन्ज २० साउन : आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जमा कार्यरत कर्मचारी सहित परिवारका सदस्य गरी १२ जना कोरोना संक्रमण भएपछि कार्यालय सिल गरिएको छ ।
आइसोलेसन सेन्टरमा परिणत भएको कर कार्यालयबाट कामकाज हुने कुरै भएन । तर साउन महिनामा राजश्वसंग सम्बन्धीत काम कसरी अगाडी बढ्छ भन्नेमा सेवाग्राही अन्यौल छन् ।
भ्याटमा दर्ता भएका फर्मका लागि साउन महिनाभित्र खरिद विक्री खाता आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रमाणित नगरे जरिवाना लाग्छ । अनुमानित कर विवरण बुझाउने, खरिद विक्री प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता काम कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्यौलता छाएको
छ । अन्य कार्यका लागि समय भएकाले साउन मसान्तमा गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर खाता प्रमाणित जस्ता कामका लागि भने साउनमै
यो विषयलाई कसरी अगाडी सूचारु गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले भने,–‘अवस्था सामान्य रहे आईतवारबाट काम सुचारु गर्ने सोचेका छौं । तर आईतवारबाट कार्यालय खोल्नका लागि अवस्था सामान्य हुन्छ की हुँदैन हेर्दैछौं ।’
दिनैपिच्छे सरकारी कार्यालयमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आईतवारदेखि लागु भएको निषेधाज्ञा मंगलवार सकिदैछ ।
यस विषयमा थप निर्णय के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । बाँकेमा संक्रमणदर बढ्दै गएको र केन्द्रीयस्तरमा समेत पुन लकडाउन हुने चर्चा चलिरहेका बेला आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले आईतवारबाट सेवा दिन सक्छ की सक्दैन ? पौडेल भन्छन्–‘म फेरी भन्छु अवस्था सामान्य रहे आईतवारबाट सेवा दिन्छौं । यसविचमा लकडाउन जस्ता निर्णय भए अर्कै कुरा ।’
प्रकाशित मितिः २० श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:२८ |
Prevविद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत १ सय ३५ कर्मचारीको कोरोना वीमा
Nextबाँकेमा आज निषेधाज्ञा सकिदै, आगामी रणनीतिका विषयमा दिउँसोसम्म निर्णय हुने